के लेवर काम गर्न जाने नेपाल को युवा होइन ? – Hotpati Media
के लेवर काम गर्न जाने नेपाल को युवा होइन ?
१२ असार २०७६, बिहीबार २०:०२ मा प्रकाशित (1 वर्ष अघि) अनुमानित पढ्ने समय : १ मिनेट
सुबास थापा, उदयपुर कटारी
बैदेशिक बोर्डको सचिवालय काठमाडौं गएर सिफारिस लिएर आएँ अनि उदयपुरको कटारीको पहिले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक गए म्यानेजरले भन्नेभयो । तपाईको सिफारिमा छैन लेवर काम गर्न लाइ सहुलियत ऋण मिल्दैन भन्नुभयो । कटारीको धेरै जसो बैंक गए एनएमबी बैंक मेनेजरले भन्नुभयो सहुलियत ऋण बारेमा मलाई थाहा छैन । वैदेशिक रोजगार कुनै गुनासो र लोन दिने बैंक हरुले आनाकानी गरे भने फोन गर्नु भनेर दिएको नम्बरमा फोन गरे उहाँबाट भन्नुभयो मालाइ बैंक म्यानेजरसँग कुरा गर्न दिनु मैले कुरा गर्न दिएँ उहाँ म्यानेजरसँग कुरा गर्नु भयो ।
त्यसपछी म्यानेजरले भन्नुभयो कि सहुलियत ऋण मिल्दैन । ऋण लिन आएको मान्छेको फायल मिलेन भनेर फर्काईदिनु उहाँले बोलेको मसँग रेकर्ड छ माथि बाट नदिनु भनेसि कसरी मिल्छ र बैंकको म्यानेजर बिदेस गएको काम गरेको सार्टिफिकेट माग्ने भयो । सहुलियत ऋण नदिएर मलाई दुःख छैन कि म जस्तै अरुले दुख नपाउन किन बिदेस काम गर्ने जाने युवा हरु ९९ प्रतिशत लेवर छन ।
के पहिले फारम भरेको टाइम लेवर काम गर्न सहुलियत ऋण मिल्दैन भन्नु पर्छ नि मलाई भनेको भए यत्रो दुःख हुदैन थियो र पैसा खर्च हुदैन थियो ।
कोरियामा राहदानीको अवधि सकिए भिसा नथपिने
वैदेशिक रोजगारीले सम्बन्ध विच्छेद बढ्यो
कोरियामा नेपाली कामदार -कम्पनी परिवर्तन गरे पनि पुन आउन पाउने
कोरियाको रोजगारी एक महिना पछि शुरु हुने